F.G, Author at
Articles by F.G
Maxay Kawada Hadlayaan Ra’iisul Wasaare Rooble Iyo Midowga Musharaxiinta?
November 28, 2021 F.G 0
R/Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ee xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble iyo Midowga Musharaxiinta ayaa haatan waxaa kulan gaar ah uga socdaa Magaalada Caasimadda ah ee Muqdisho. Kulanka R/Wasaare Rooble iyo Midowga Musharaxiinta ayaa looga hadlayaa arrimaha doorashooyinka dalka gaar ahaan qaabka ay ku ku socoto doorashada Golaha Shacabka oo ka bilaabatay Muqdisho, maamulada Koonfur Galbeed iyo Galmudug. Warar lagu kalsoonaan karo oo la helayo ayaa sheegaya in Midowga Musharaxiinta ay Rooble u caddeyn doonaan Mowqifkooda ku aadan doorashada oo ay sheegeen in wax socda aysan aheyn doorasho, balse ay tahay boob. Musharaxiinta ayaa shaaciyay in aysan aqbali doonin doorashooyinka deegaanada qaar ee lagu bilaabay boob qaawan oo la isu awood sheegtay, laguna tuntay habraacyadii doorashada, taasoo halis gelineysa xasiloonida dalka iyo jiritaanka dowladnimada. Kulanka socda ayaa waxaa ka qeyb galaya Madaxweyneyaashii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud, Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame RWasarihii Hore Xasan Cali Kheyre Madaxweynihii Konfur galbeed Shariif xasan, waxaana sidoo kale kulanka kasoo muuqday Musharax C/kariin Xuseen Guuleed oo muddooyinkiin u dambeeyay ka maqnaa shirarkii Musharaxiinta.
Guddiga Xalinta Khilaafaadka Oo Hakiyay Natiijada Kursiga Uu Boobay Yaasiin Fareey
Guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban ee dalka, ayaa manta ku dhawaaqay iney hakiyeen natiijada kursiga tirsigiisu yahay Hop067, kaasoo khamiistii doorasho ka dhacday Dhuusa-Mareeb uu ku soo baxay kusimaha taliyaha NISA Yaasiin Fareey. Qoraal ka soo baxay guddiga ayaa lagu micneeyay sababta hakinta rasmi ahaan natiijada kursigan iney salka ku heysa dacwad ay soo gudbiyeen musharrax lagu magacaabo Axmed Cabdikariin Cali iyo sidoo kale Nabadoon Cali Xasan Cali (Cali Jeesto). “Guddiga xallinta khilaafaaadka doorashada dadban (GXKHDD) ee 2020/2021, asagoo fulinaya Habraaca lagu dhisay GXKHDD ee soo baxay I-dii Oktoober 2020, wuxuu ku wargalinayaa guddiga hirgalinta doorashooyinka heer Federal (GHDHF) in dacwad laga keenay kursi Lumber HOP#067,” ayaa lagu yiri warqadda ka soo baxday guddiga xallinta. Guddiga doorashooyinka ee heer federal ayaa lagu wargeliyay qabashada dacwaddan, iyadoo haatan ay socoto baaritaanada wax aka jira cabashada loo soo gudbiyay, iyadoo barista kadib ay warbaahinta la wadaagi doonaan waxa u soo baxa. “Haddaba guddiga xallinta khilaafaadka doorashooyinka dadban (GXKHDD) ee 2020/2021, asagoo gudanaayo waajibaadka shaqo ee loo igmaday wuxuu ku wargelinayaaa guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal (GHDHF) in [Sii aqri]
Wasiir ka Tirsan Puntland Oo Sheegay In Ciidamada PSF Ay Laba Garab Kala Noqdeen
Wasiir ku-xigeenka Qorshaynta Puntland ahna Duqa degmada Boosaaso Cabdiqani Axmed Ismaaciil (Deera-dile) ayaa ka hadlay muranka u dhexeeya Maamulka Puntland iyo Ciidamada Hay’adda PSF, kaasi oo ka dhashay xilka qaadista Agaasimihii PSF-ta. Duqa Boosaaso Cabdiqani Deera-dile oo shir Jaraa’id u qabtay warbaahinta ayaa u sheegay in Ciidamada PSF ay kala noqdeen laba garab, oo ay u kala wareegeen Agaasimaha cusub ee dhawaan la magacaabay ee Amiin Cabdullaahi Xaaji Khayr. Ciidamo kale oo kamid ah PSF ayuu Duqa Boosaaso tilmaamay inay weli la joogaan Agaasimihii uu xilka qaadista ku sameeyay Madaxweynaha Puntland ee Maxamuud Cismaan Diyaano, kaasi oo sharci darro ku tilmaamay xilka qaadista lagu sameeyay. Wasiir ku-xigeenka Qorshaynta Puntland ayaa shacabka Magaalada ugu baaqay inay is dejiyaan oo aysan ka barakicin guryahooda, wuxuuna Maxamuud Diyaano ku eedeeyay inuu dadka ku wado khal-khal gelin, taasina uu sheegay in aysan aqbali doonin. Dhanka kale Ma jiro wax war ah oo kasoo baxay Hay’adda PSF oo ay uga hadlayaan hadalka kasoo yeeray Duqa Boosaaso Cabdiqani Axmed Ismaaciil oo ku saabsan in Ciidanku laba garab u kala jabay, xilli [Sii aqri]
Xildhibaan Aadan Madoobe Oo Mar Labaad Loo Doortay Xildhibaan Ka Tirsan Golaha Shacabka
Guddoomiyihii hore ee Baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe ayaa ku guuleystay doorashada kursiga tirsigiisu yahay Hop 189, kadib doorasho ka dhacday Magaalada Baydhabo ee Xarunta Gobolka Baay. Aadan Madoobe ayaa waxaa doorashada kula tartamay Musharax Xasan Cali Maxamed, waxaana Madoobe uu helay Codad gaaraya 63 Cod, halka Xasan Cali uu isna helay 11 Cod, sida uu shaaciyay Guddiga doorashada Koonfur Galbeed. Guddiga hirgelinta doorashada ayaa sheegay inay codeeyeen 74 Ergo, Guddoomiyihii hore ee Baarlamaanka Soomaaliya ay mar kale kamid noqonaya Xildhibaanada Golaha Shacabka, isagoo ku fadhiyey afartii sanno ee lasoo dhaafay kursiga HOP189. Dhanka kale Doorasho goorsii horeeysay oo Maanta ka dhacday Magaalada Baydhabo ayaa waxaa kusoo baxay Maxamed Cali Xasan oo ah Wasiirka Howlaha Guud ee Koofur Galbeed, wuxuuna ku guuleystay kursigii uu ku fadhiyey Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari.
Machadka Heritage Oo Sheegay Halis Xooggan Oo Kasoo Socota Ku Shubashada doorashada
November 25, 2021 F.G 0
Warbixin uu soo saaray machadka daraasaadka ee Heritage oo si qoto dheer looga hadlayey arrimaha doorashooyinka iyo waxa xiligan xal u noqon kara, ayaa waxaa walaac xoogan looga muujiyey hanaanka ay ku socdaan. Heritage ayaa ugu horeyntii warbixinteeda ku sheegtay haddii lagu sii socda doorashada musuq-maasuqa iyo wax isdaba marinta inay fashil u horseedi doonto mashruuca dowlad dhiska Soomaaliya. “Sannadkan 2021-ka waxa doorashadii ku yimid dib-u-dhac iyo xil-fidsasho ka duwan wixii hore. Haykalka siyaasadda qaran ee Soomaaliya waxa boqonteeda heeray cadaawad iyo kala qaybsanaan. Intii uu madaxweyne Farmaajo xilka hayey (2017 – 2021), isaga iyo hoggaamiyeyaasha dawlad-goboleedyadu waxa ay isku noqdeen dab iyo dhagax aan dirirtoodu gamaarin.” Warbixinta ayaa sidoo kale machadka diirada ku saaray sababaha gaabiska tirada badan ku keenay hanaanka doorashada iyo qoddobo dhowr ah oo si gaar ah ugu xaglinaya danaha Golaha Wada-tashiga Qaranka oo ayagu meel marsadeen. Inkasta oo ay doorashooyinka dadban ee Soomaaliya yihiin kuwo ka fog caddaaladda iyo xornimada, haddana labaatankii sano ee la soo dhaafay, waxa ka soo baxay natiijooyin ay si weyn ugu qanceen saammilayda siyaasadda [Sii aqri]
Prof Jawaari”Gogol Nin Gob Ah Oo Oday Ah Wax Ka Soo Doontay Meeshaan Ma Taalo”
Guddoomiyihii hore ee Golaha Shacabka Prof Maxamed Cismaan Jawaari ayaa sheegay in caqabado iyo culeys uu kala kulmay magaalada Baydhabo isagoo ka digey in dowladnimada Soomaaliya ay meel dheer ku sii dhacayso. Prof Jawaari oo hadlayay xilli uu ka soo ambabaxay magaalada Baydhabo ayaa sheegay in doorasho hufan oo xalaal ah aysan ka socon Baydhabo balse ay ka jiraan gabood fal lagu takri falayo xuquuqda muwaadinka ee ah inuu wax doorto ama la doorto. “Maalmahan waxaa joogay Baydhabo oo aan u imid kursiga 103 tartankiisa inaan ka qeyb galo, caqabado iyo culeysyo ayaa naga horyimaadeen, arrimaha Baydhabo ka socdo aniga shaqsiyan qiyaasta aan qiyaasay ma fidsana gogol, nin gob ah oo oday ah wax ka soo doontay meeshaan ma taalo” Prof Jawaari ayaa sheegay inuu yahay weli musharax u taagan kursiga 103 uuna ka war dhowrayo odayaasha dhaqanka ee leh kurisga 103 iyo madaxtooyada Koofurgalbeed. “Allaha u raxmado Soomaaliya waxaan ka baqayaa intii yareyd ee dowladnimada aan soo kasbanay inay faraheeda ka baxdo.”ayuu yiri Prof Jawaari oo muddo dheer dalka Soomaaliya xilal kala duwan ka [Sii aqri]
Cabdiraxmaan Cabdishakuur Oo Ku Tilmaamay Doorashada Dalka “Sharaf Dhac Qaran”
Musharax Madaxweyne Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa naqdiyay doorashada ka socota dalka Soomaaliya isagoo ku tilmaamay inay tahay mid sharaf dhac qaran ah. Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo bartiisa facebook soo dhigey qoraal kooban ayaa waxa uu ku sheegay in dalka aysan ka socon doorasho, waxana uu ku baaqay in shacabka ay u diyaar garoobaan waxa uu ugu yeeray ‘sidii ay dulmiga iyo heeryada dulliga u diidi lahaayeen. Halkan hoose ka aqriso qoraalka uu soo dhigey bartiisa Musharax Cabdiraxmaan Cabdishakuur. “Doorasho tartankeeda loo diiday Prof Jawaari oo dalka wuxuu u soo taray la ogyahay, Yaasiin Fareey oo la tuhunsane ahna xildhibaan looga soo dhigay, ma ah boob doorasho oo keli ee waa sharaf dhac qaran, in la is quusiyo, dadkana la kala dooransiiyo “i dooro ama aan ku dilo”. “Waxaan xusuusinayaa kuwa foolxumada iyo fadeexada intaa la eg ku kacaya ama ka marqaati kacaya, iyagoo Farmaajo ugu abaal gudaya in ay dadnimadooda, damiirkooda iyo qarankaba dhaawaceen. Waxaana hubaal ah in ay meelmari doonin, dulmiguna uusan waari doonin. Doorasho ma jirtee, shacabka Soomaaliyeed waa in ay u diyaar garoobaan sidii [Sii aqri]
R/Wasaaraha Cusub Ee Sweden Ayaa Is Casilay 7 Saac Kadib Markii Ay Dhacday Dowladdii Dhexe
November 24, 2021 F.G 0
Haweeynadaan Go’aankeeda ayaa ahaa in ay xilka ka degto ayada uu daba socday dhacdooyin is daba joog ah oo keenay in miisaaniyadeeda ay ku guuldareysato in ay soo marto baarlamaanka ka hor inta uusan xisbiga da’da yar ee Miljöpartiet ku dhawaaqin in uu ka baxayo xukuumadda wadaagga ah. Waxaa jirta dhaqan dastuuri ah oo ah in dowlad wadaag ah ay iscasisho marka hal xisbi uu ka tago,” Andersson, oo ah xisbiga Sociale dimuqraadiga, ayaa u sheegay suxufiyiinta. “Ma doonayo inaan hogaamiyo dowlad sharcinimadeeda su’aalo la iska weydiin doono.” Magdalena Andersson waxa ay sheegtay in ay rajaynayso in mar kale loo doorto jagadan dhawaan iyada oo ah madaxa dawlada laga tirada badan yahay oo ka kooban xisbiga Socialdemokraterna oo kaliya. Qalalaasaha arbacadii ayaa bilaabmay markii xisbiga Center-ku uu la noqday taageeradii uu u hayay miisaaniyada Andersson, sababo la xidhiidha tanaasulaadkii loo sameeyay Bidixda. Taasi waxay ka dhigan tahay in miisaaniyadda Ra’iisul wasaaraha cusub aysan haysan codad ku filan oo uu ku meel mariyo baarlamaanka. Sharci-dajiyayaasha ayaa taa beddelkeeda ansixiyay miisaaniyad kale oo ay soo bandhigeen mucaaradka [Sii aqri]
Ku Dhawaad 31 qof oo tahriibayaal ah oo ku sii jeeday dalka Ingiriiska ayaa ku dhintay English Channel oo ah marin biyood u dhaxeeya dalalka Ingiriiska iyo Faransiiska una dhow magaalada Calais ka dib markii ay la degtay doonidii ay la socdeen dadkaasi. Ururka Caalamiga ah ee Socdaalka ayaa sheegay in falkaani uu yahay khasaarahii ugu weynaa ee hal mar ah tir badan oo dad ah ku dhintaan. R/wasaaraha Ingiriiska Boris Johnson ayaa sheegay inuu aad uga naxay waxa dhacay, isaga oo intaa ku daray in UK ay sameyn doonto tallaaba kasta si wax looga qabto kooxaha dadka tahriibiya.Waxaana lagu wadaa inuu guddoomiyo kulan degdeg ah oo arrintaan looga hadlayo. Doon nooca kaluumaysiga ayaa dirtay qaylo dhaan gelinkii dambe ee maanta kadib markii dadkii doontasi kaluumaysiga saarnaa ay arkeen dadka tahriibayaasha ah ee ku qaraqmay meel u dhow xeebaha badda Faransiiska. Masuuliyiinta Faransiiska iyo Ingiriiska ayaa wada hawlgal samatabbixin ah oo cirka iyo badda ah si ay u ogaadaan haddii ay cid heli karaan. Mr Johnson waxa uu sheegay in dhimashadu ay tahay “musiibo”, isaga [Sii aqri]
Guddiga doorashada Heer Federaal “Waan Baareeynaa cabashooyinka Na soo gaaraya”
Guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa caawa shaaciyey iney soo gaareen cabashooyin iyo talooyin ku aaddan doorashooyinka socda. “Guddigu wuxuu ku samaynayaa baaritaanno dhammaan cabashooyinka. Waxaana bulshada Soomaaliyeed u sheegaynaa in wax kastoo baal-marsan hufnaanta doorashada uusan guddigu marna aqbali doonin. Annagoo ugu baaqayna tartamayaasha iyo daneeyayasha doorashada in ay wixii cabasho ah u maraan hanaanka loo dejiyey in wax looga qabto murannada doorashada, iyadoo ay dhisan yihiin guddiyaddii loogu tala galay in ay wax ka qabtaan” ayaa lagu yiri War-saxaafadeed uu caawa soo saaray guddiga oo u qornaa sidatan:
1 2 3 … 958 »